Kupamba nhau haisiri nzira yakaipa - Kunze kwekunge Kusagadzikana | Martech Zone
Mushure mekuvhunduka kwekutanga uye kusuruvara panhau dzekuti munhu ane mukurumbira atora nhamo hupenyu hwake vhiki rino, ndakatanga kufunga nezve zvingazonyorwa online. Ini ndakatogadziridza nzira dzangu dzekudyidzana kuti kutya kwangu kungave kuti mabhureki aizoedza kuruka nhau mune chimwe chinyorwa nechinangwa chekutyaira traffic yakawanda (nemari) kune yavo brand. Ini ndanga ndichitarisira kuti hazvaizoitika… asi maminetsi mashoma gare gare ndakaona yekutanga yakaburitswa paLinkedIn. Ugh.
Iri harisi zano rakanyorwa pakutanga David Meerman Scott akadana nhau.
Newsjacking: Maitiro ekupinza brand yako munhau dzezuva, kugadzira kumonyanisa kunobata maziso kana avhurika zvakanyanya.
Heano Ken Ungar achikurukura Kubvuta News. Ken Ungar ndiye mutungamiri weU / S Sports Advisors, yemitambo & yevaraidzo inoshambadzira agency iri kuIndipolis, ine mahofisi muChicago neCharlotte.
Handipikisane nazvo nhau. Zvinoita zvine musoro kutora nhau yenyaya iri kukwira mukuzivikanwa uye kuishandisa kana ichifanira kune yako mhando. Muenzaniso unogona kunge uri wekupedzisira webasa revatengi nhau nekambani huru yekambani apo mumwe munhu akanyora foni inoshungurudza kwavanga vachiedza kubhadharisa fizi izvo zvisina mvumo. Kana kambani yako iine yakasarudzika sevatengi uye isina mubhadharo… kunyora chinyorwa kuita kuti tarisiro izive "Isu Hatina Mari Senge [isa zita rekambani]" inogona kukuunganidza iwe zvakanyanya kutarisisa kana musoro wenyaya uri kufamba mukuzivikanwa.
Asi izvi zvakasiyana. Ini handisi wekunyora zvangu, asi ndinogona kudaidza kuyedza kwandakaona svondo rino nhau kugura.
Nhau Kubiridzira: iyo nzira yekutora nhau hombe nhau irikukwezva kutarisisa uye kunyora zvemukati wenyaya yekuyedza uye kubhidharisa pamugwagwa uye kusazivikanwa - kana zvisina basa zvachose kuchiratidzo chako.
Paive nezvimwe zvisingaite zvinyorwa zvakanyorwa paInternet kugovana nyaya uye kukoshesa kune mukurumbira akatora hupenyu hwake. Ivo vaibata zvechokwadi uye vaive vasina chinangwa kunze kwekubhadhara ruremekedzo. Ini handisi kutaura nezve izvo zvinyorwa.
Vashoma vevatengesi vezvinhu vakatora dambudziko ndokunyora zvisina tsananguro zvinyorwa zvine zita remukurumbira mumusoro wenyaya kungoedza kufambisa tarisiro munzira yavo. Zvinyorwa zvakaita 5 Zvidzidzo Zvako Bhizinesi Rinogona Kudzidza kubva [isa zita remukurumbira]. Ndiri kugadzira iwo chaiwo musoro kumusoro asi zvinyorwa zvandakaona zvaive zvakafanana. Vakaisa zita remukurumbira kuti vabude pamasocial media neSEO. Ini handigone kufungidzira zvavaifunga, kuyedza kutengesa mashoma mashoma kumusana kwenjodzi iyi.
Usazviita. Mavara uye vanhu vandakaona vachiita izvi vakabva varasa ruremekedzo rwangu. Ini ndakavatevera, ndisingavade, ndakavabvisa kubva pane zvinyorwa zvangu zvekuverenga, uye handife ndakavatarisa zvakafanana zvakare. Kune bundu renguva pfupi, ivo vakandirasa nekusingaperi. Izvo hazvina kukodzera njodzi kune chero mhando. Uye zviri kunze kwemiganhu yehunhu hwakajairika.
Tags: muchisoCelebritydavid meerman scottrufukuguraken ungarnhau kuguranhau-jackingnhaudambudzikoU / s vanachipangamazano vezvemitambo
Aug 15, 2014 pa 9: 39 AM
Yakanaka post Doug! Kutenda nekugovana! Ini ndinobvumirana zvachose nezvamakatumira pano ..